Wafdi sare oo ka socda QM oo maanta soo gaaraya Muqdisho - Halbeeg News
Rosemary DiCarlo wakiilka xoghaya guud ee Qaramada. Midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda, xuquuqda sawirka: UN Web TV
MUQDISHO(HALBEEG)- Waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho uu soo gaari wafdi heer sare ah oo ka socda hay’adda Qaramada Midoobay kaasoo ay horkacayo uqeybsanaha arrimaha siyaasadda ee Qaramada Midoobay, marwo Rosemary DiCarlo.
DiCarlo iyo wafdigeeda ayaa la kulmi doonaa hoggaamiyayaasha dalka halkaasoo looga xaajoon doono howlaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo sii xoojinta xiriirka labada dhinac.
Wafdiga iyo masuuliyiinta dowladda ayaa si wada jir ah shir jaraa’id ugu qaban doona xafiiska raysul wasaaraha marka uu kulanka soo idlaado.
Ilo wareedyo ku dhow xafiiska raysal wasaaraha ayaa tibaaxaya in in kulanka masuuliyiinta lagu lafa guri doono mugdigii soo kala dhexgalay xukuumadda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay ee la xiriiray ceyrintii dalka looga ceyriyay wakiilkii hore ee Qaramada Midoobay Nicholas Haysom.
Wafdiga iyo xukuumadda ayaa isla qaadaa dhigi doono wadiiqooyin lagu hormarinayo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay.
Booqashada wafdigan ee Soomaaliya ayaa noqonaysa middii ugu horreysay ee wafdi ka socda Qaramada Midoobay ay ku yimaadaan Soomaaliya tan iyo markii dalka laga ceyriyay wakiilkeedii, waxaana la rajaynayaa in booqashadani ay dhisi doonto buundo xiriirisa labada dhinac iyada oo xogahayaha guud ee Qaramada Midoobayna in uu soo magacaabo wakiil cusub oo Soomaaliya u fadhin doona.
Horraantii bishan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in Nicholas Haysom oo ahaa wakiilka Qaramada Midoobay in aan laga rabin dalka .
Xukuumadda ayaa ergayga ku eedeysay in uu baal maray maamuuskii ay lahayd Qaramada Midoobay fara gelinna ku samaeeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Tallaabada xukuumadda ay ku ceyrisay mudane Haysom ayaa ka dambeysay kadib markii uu mudanuhu uu xukuumadda Soomaaliya ka codsaday in ay faahfaahin ka bixiso haddii ciidamada ay taageerto Qaramada Midoobay ay ku lug lahaayeen rasaas la sheegay in la huwiyay dibad baxayaal ku sugnaa magaalada Baydhabo kadib qalalaase ka dhashay xariggii Mukhtaar Roobow.
Bar Internet oo islaami ah oo lagu soo kordhinayo baraha bulshadu ay ku kulanto